कोरोना भाइरसका कारण २३ इटालियन डाक्टरको मृत्यु - Nepal Insider
कोरोना भाइरसका कारण २३ इटालियन डाक्टरको मृत्यु
March 24, 2020 854
एजेन्सी । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण २३ इटालियन डाक्टरको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएयता २३ डाक्टरहरुको मृत्यु भएको हो । इटालियन चिकित्सक संघकाअनुसार मृत्यु भएका २३ मध्ये १९ जना लोम्बर्डी क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टरहरु हुन् । लोम्बर्डी क्षेत्र इटालीको सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा परेको क्षेत्र हो । अन्य ४ जना डाक्टर भने उत्तरी इटालीको इमिलिया रोमाग्ना, दक्षिणी इटालीको नेपल्स, मध्य इटालीको मर्चै क्षेत्रमा कार्यरत रहेका थिए ।
इटालीमा ४ हजार ८ सय २४ स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । यद्यपि, संघले केही डाक्टरहरुको अचानक मृत्यु भएकोले सिधै भाइरसको संक्रमणबाटै मृत्यु भएको हो कि होइन पुष्टि हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।इटालीमा उक्त भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म झण्डै ६ हजार जनाको मृत्यु भैसकेको छ भने ५९ हजार १ सय ३८ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना नेपालमा भित्रन नदिन भारतसंगको सिमाना बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । चीनवाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभाव अहिले १८८ मुलुक सम्म पुगेको छ । नेपालको सिमाना भारतमा पनि कोरोनाको प्रभाव देखिए पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनल अहिले विश्वमा देखिएको कोरोना नि य न्त्रणको प्रयासमा लागेको छ । चीनको उहान शहरबाट शुरु भएको यो कोरोनाको प्रभाव अहिले युरोप तिर पुगेको छ । चीनमा कोरोनाको सं क्र म ण घट्ने क्रममा रहेको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले इटालीलाई नयाँ ‘इपिसेन्टर’ तोकेको छ।
इटाली, स्पेन लगायत युरोपका सबैजसो देशमा ‘दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले’ कोरोना फैलिएको छ। निधन हुनेको संख्या पनि सोही अनुपातमा बढेको बढ्यै छ। बेलायत र अमेरिकामा पनि निधन हुनेको संख्या बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रोकथाम र फैलिरहेका राज्यसंग समन्वय गरेर काम गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा टेड्रोसको नेतृत्वमा ‘न्यूक्लियस टिम’ बनेको छ।
सो टिमले नियमित पत्रकार भेटघाट गर्छ। पत्रकार भेटघाटमा नेपालको समेत सन्दर्भ जोडेर गरिएका प्रश्नको सारांश छ–कोरोना भाइरसबाट बाँच्ने उपाय घरमै बस्नु नै हो। नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिलाई लिएर भर्खरै गरिएको पत्रकार भेटघाटको सारसंक्षेप।
चीनमा कोरोनाको बारेमा सबैभन्दा पहिला बताउने चिकित्सकको कुरा सरकारले पत्याएन । कोरोनाकै कारण ति चिकित्सकको निधन भइसकेको छ । अहिले सरकारले सो चिकित्सकका परिवारसंग माफी मागेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसको जानकारी पाएलगत्र्त चिनियाँ सरकारसँग समन्वय गरेर तत्काल उहान ‘लक–डाउन’ गर्ने लगायतका रणनीतिक काम गरेका थियो ।
जेनेभाबाट टिम नै गएर राष्ट्रपति सी चिङफिङसँग बसेर रणनीति बनेको हो। तत्कालै ‘लक–लडाउन’ गरेर चीनले आफ्ना सबै उपाय अपनाउनाले आज नि य न्त्रण को अवस्थामा आइपुगेको हो। हामीले ‘पा न्डे मिक’ घोषणा गर्न ढिलो भएर आएको भयावहस्थिति होइन यो।
मानिसलाई कोरोना लाग्यो कि म रि न्छ भन्ने भ्रम छ । तर कोरोना शरीरमा प्रवेश गरेपछि सबैलाई त्यसको लक्षण नदेखिन पनि सक्छ । देखिएका मानिसमा पनि नियन्त्रण भएर जीवन सामान्य पनि हुन्छ। कमजोर स्वास्थ्यस्थिति खासगरी श्वासप्रश्वासका रोगीमा यसले बढी असर गर्ने हो। नेपालमा अहिले सम्म कोरोनाको सं क्र म ण देखिएको छैन । तर सरकारले तयारी भने गरेको छ । प्र ति रोध क्षमता बलियो भएकोले सहयोग गरेको पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म म हा मा री नदेखिनु साह्रै राम्रो कुरा हो तर यसो भन्दैमा ढुक्क हुनु हुँदैन।
तत्कालै भारतसँग जोडिएका सिमा बन्द गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगयठनको सुझाव छ । भारतवाट नेपाल भित्रनहरुको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर १४ दिने क्वारेन्टाइनमा लगिहाल्नुपर्छ। नेपालमा तयारीको अवसर भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्न संगठनले आह्वान गरेको छ ।
भोलि सं क्र म ण फैलिहालेको खण्डमा आपतकालीन संरचनातिर ध्यान दिनुपर्छ। हुलमुलमा नजाने, हात नमिलाउने र घरमै बस्ने। राज्य बोलेर मात्र हुँदैन। राज्यको तर्फबाट तयारी हुनैपर्छ। अर्कोतिर जनताले पनि राज्यले भनेको मान्नुपर्छ। सं क्र मि त हुनबाट जोगिने उत्तम उपाय घरमै बस्नु हो। घरमै बस्नुपर्छ। अनि भाइरस नि य न्त्र णमा आउन सक्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको छ ।
Prevसहयोग लिएर चिनियाँ विमान नेपाल आउँदै
Nextकोरोनासँग लड्न नेपाललाई चीनको साथ, नेपाल आफूलाई एक्लो नठान्‍नु भन्दै पठायो यस्तो सन्देश
कुवेतमा ढिस्कोले पु’रिएर श्यामको ज्यान गुमेपछि शो’कमा डुब्यो गाउँ
पैसा नजोगिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
यूएईको आबुधाबीमा ३ नेपाली युवतीको निधन
काेराेनाका कारण पहिलाे पटक एक नेपालीकाे ज्यान गयाे (38912)
यस्ता ब्यक्तिलाई मात्रै लाग्दछ कोरोना भाइरस ! जानी राखौं (14364)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (14336)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (13388)
लकडाउनमा दूध किन्न निस्केका युवाको प्रहरीको लाठीचार्जबाट मृत्यु, परिवारमा रुवाबासि (11389)
नेपालमा कोरोना संक्रमितकहरुको संख्या धमाधम बढ्न थाल्यो (10221)